भीम रावल एमालेमा निर्णायक शक्ति, कस्लाई देलान् साथ ? « रिपोर्टर्स नेपाल
भीम रावल एमालेमा निर्णायक शक्ति, कस्लाई देलान् साथ ?
काठमाडौं, ७ साउन । नेकपा एमाले फुट्ने या जुट्ने केही दिनमै टुंगो लाग्ने भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच बढी भन्दा बढी सांसद र केन्द्रीय सदस्य पक्षमा पार्ने रस्साकस्सी परिरहेको छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट गठन भएको कमिटीलाई आधार मान्ने हो भने केपी शर्मा ओली स्पष्ट बहुमतमा छन् । संसदीय दलमा पनि उनको बहुमत छ । ओलीको साथमा २०३ केन्द्रीय सदस्यमध्ये १२० छन् । नेपालको पक्षमा ८० को हाराहारीमा छन् । यो संख्या उपाध्यक्ष भीम रावल पक्षधरलाई समेत गणना गर्दाको हो । बामदेव गौतमको साथमा केही केन्द्रीय सदस्य छन् ।
संसदीय दलमा ओलीको पक्षमा ८५, नेपालको पक्षमा तुलसा थापालाई समेत गणना गर्दा २४ र बाँकी ११ जना तटस्थ भूमिकाका सांसद छन् । ११ जनामा भीम रावलसहितका छन् ।
अब एमाले एक हुँदा या फुट्दा कस्ले कति केन्द्रीय सदस्य र सांसद पुर्याउन सक्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । यसैका आधारमा एमालेका हस्ती नेताहरुको राजनीतिक भविष्यले पनि एउटा स्पष्ट मार्ग पाउँछ ।
वरिष्ठ नेता माधव नेपाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने पक्षमा छैनन् । उनले ओलीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा माग्न लगाइरहेका छन् । तर, ओली तयार छैनन् । यसकारण फुटका लागि नेपालले बढीभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र सांसद तयार गर्न खोजेको देखिदैछ ।
नेपालले उपाध्यक्ष भीम रावललाई पक्षमा पार्न खोजेका छन् । उनले बुधबार टोखा पुगेर रावललाई भेटेका छन् । मिलेर अगाडि बढ्ने प्रस्ताव पनि राखेका छन् । तर, रावल नेपालसँग रुष्ट छन् । उनलाई ओलीले पनि महत्वपूर्ण प्रस्ताव राखेका छन् । कार्यवाहक अध्यक्ष दिने प्रस्ताव रावललाई पुगेको छ ।
रावल यतिबेला ओली र नेपालको तानातानमा छन् । उनी एमालेभित्र निर्णायक शक्ति बनेका छन् । उपाध्यक्ष बामदेव गौतम नेपाल समूहमा पुगेपछि रावल निर्णायक शक्ति बनेका हुन् । उनी अहिले कुनै पनि पक्षमा नलागेको सन्देश दिइरहेका छन् ।
रावलसँग केही सांसद र केन्द्रीय सदस्य पनि छन् । रावलको साथमा सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, झपट रावललगायत नेताहरु देखिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उनको पकड बलियो छ । त्यहाँ एमालेका बहुमत सांसद रावल पक्षका हुन् ।
पार्टी कमिटीहरुमा पनि रावलको पकड बलियो भएकाले उनले जसलाई साथ दिन्छन् त्यो बलियो हुने निश्चित छ । माधव नेपालले रावलको साथ पाएमा ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीमै अल्पमतमा पार्न सकिने देखेका छन् । अहिले ८३ जना केन्द्रीय सदस्य साथमा रहेको, बामदेवको पहलमा १३ जना आउनसक्ने देखेबाट रावलले साथ दिएमा १०२ पुर्याउन सकिने देखेका छन् । त्यसैले उनी रावललाई फकाउन लागिपरेका छन् ।
तर, ओलीले रावललाई साथमा लिएर बढ्न खोजेका छन् । रावल तानातानमा परेका छन् । अब उनले जस्लाई साथ दिन्छन् उही एमालेभित्र बलियो हुने अवस्था बनेको छ ।
एमालेभित्र हस्तीहरु को कता
रावलसहित तटस्थ भूमिकामा रहेकाहरु